Ukwenza ngokwezifiso i-LightDM kancane ku-Debian | Kusuka kuLinux
Yenza ngokwezifiso i-LightDM kancane ku-Debian
Ngemuva kwalokho ngifake I-LightDM Ngithole ukuphuza okuncane ukukukwenza ngesandla, ngakho-ke ngiqale ukuphenya ukuthi ngikwenza kanjani.
En Debian Kulula kakhulu, futhi noma singeke senze okuningi, okungenani okwamanje kwanele. Zonke izinguquko zizokwenziwa kufayela /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf esivula ngazo gedit usebenzisa ikhonsoli.
Noma nge I-Alt + F2:
Yebo, ifayela liphawulwe kahle, ngakho-ke ngeke ngichaze okuningi ngalo. Amapharamitha wokumisa yilena:
Futhi kulula kakhulu ukuyiqonda, akunjalo? Nempahla Isizinda Ngimtshela ukuthi athathe iphepha lodonga enginalo kufolda yami yesithombe. Nge isihloko-igama Ngisetha ingqikithi IGtk (lokho kufanele kube ku / usr / share / themes /) futhi nge igama lefonti ifonti engifuna ukuyisebenzisa.
Endabeni Ubuntu into iguqulwe kuphela egameni lefayela ukumiswa, kulokhu okuzoba:
Ngisho nengane ibingakwenza 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Yenza ngokwezifiso i-LightDM kancane ku-Debian
Kulula. Ngiyabonga. Ikuphi i-GDM ekhangayo yeGnome 3? Ingafakwa kanjani ku-Ubuntu esikhundleni se-LightDM?
Kuzofanele ngizame, kepha ngicabanga ukuthi kulula:
Zikhona yini izidingo zezithombe ezibekwe ngemuva? ngoba sengivele ngazama ngo-2 futhi akubabeki: S
Faka i-LightDM ekuhlolweni kwe-Debian